အမည်မှည့်ခေါ်ခြင်း၊ အမည်တူများနှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ
နက္ခတ္တဗေဒအရ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပတ်ဝန်းကျင်မှ အလွန် ဝေးကွာသည့် ကြယ်များအထိ အရာခပ်သိမ်းတို့သည် စကြဝဠာတွင် အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ စကြာဝဠာသည် အဆုံးသတ်မရှိ သို့မဟုတ် ရှိသည်ဆိုသောအချက်ကိုမူ ကျွနု်ပ်တို့ မသိရပေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်တော်တို့သည် လေ့လာနိုင်သောစကြာဝဠာနယ်ပယ်အတွင်းကိုသာ တွေ့နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ခေတ်သစ်သီအိုရီအရမူ စကြာဝဠာကြီးသည် မဟာစကြာဝဠာ ပေါက်ကွဲမှုကြီး (Big Bang) မှစတင်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ သို့သော် မဟာပေါက်ကွဲမှုမတိုင်ခင် မည်သို့မည်ပုံဖြစ်ပွားခဲ့သနည်းဆိုသည်ကိုမူ မည်သူမှ သေချာမသိကြသေးချေ။
မျက်မှောက်ခေတ် နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်များသည် စကြဝဠာကို ပို၍ နက်နဲစွာ ကြံဆကြသည်။ စကြဝဠာတွင် ကြယ်တို့သည် အခရာဖြစ်ကြောင်း သူတို့သိရှိကြသည်။ ကြယ်များ စုပြုံလျက်ရှိရာဖြစ်သော နဂါးငွေ့တန်း ဂယ်လက်ဆီအတွင်း၌ ကျွန်ုပ်တို့ ကမ္ဘာမြေ ရှိသည်။ နဂါးငွေ့အတွင်း၌ ကြယ်အများအပြားရှိသကဲ့သို့ စကြာဝဠာ အတွင်း၌လည်း နဂါးငွေ့အများအပြားရှိသည်ကို နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်များ ယခုအခါ သိလာကြပေပြီ။ ထိုနဂါးငွေ့များ အားလုံး စုပေါင်း၍ ဖြစ်သော စကြဝဠာကြီး၏ အရွယ်ပမာဏကို တိုင်းတာသောအခါ အလင်းနှစ် အသန်းအထောင်နှင့် တိုင်းတာရပေသည်။ အလင်းနှစ်ဆိုသည်မှာ တစ်နှစ်အတွင်း အလင်းသွားသည့်ခရီးကို ဆိုလိုသည်။ အလင်းသည် တစ်စက္ကန့်၌ မိုင်ပေါင်း ၁၈၆,ဝဝဝ သွားသည်။ အလင်းနှစ် တစ်နှစ်သည် မိုင်ပေါင်း ခြောက်ထရီလီယံနှင့် ညီမျှသည်။တစ်တြီလယန်သည် အင်္ဂလိပ် စံနစ်အရ တစ်နောက် သုညဆယ့်ရှစ်လုံး ပါသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ မောင့်ဝီလဆင် နက္ခတ်မျှော်စင်၌ အချင်း လက်မ ၁ဝဝ ရှိသော အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းကြီး တစ်ခု ရှိသည်။ထိုမှန်ပြောင်းကြီးဖြင့် အလင်းနှစ်ပေါင်း ၅ဝဝ,ဝဝဝ,ဝဝဝ ၌ရှိသော ကြယ်များကို ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးယူနိုင်ပေပြီ။ ထိုထက်ပို၍အားကောင်းသည့် အချင်းလက်မ ၂ဝဝ ရှိ မှန်ပြောင်းကြီးကို မောင့်ပလိုမာ၌ တပ်ဆင်ပြီးသောအခါတွင် ထိုအကွာအဝေးထက် နှစ်ဆမျှတိုး၍ မြင်နိုင်ပေလိမ့်မည်။ သို့သော် ထိုမှန်ပြောင်းကြီးနှင့်ပင် ကြည့်စေကာမူ နဂါးငွေ့ အားလုံးသည် သေးငယ်ပြီး မှေးမှိန်လျက်ပင် ရှိပေဦးမည်ဟု ဆိုလေသည်။
ကမ္ဘာတည်ပြီးနောက် ဗြဟ္မာတို့သည် ဗြဟ္မာ့ပြည်မှ စုတေ၍ လူ့ပြည်၌ ဥပပတ်ကိုယ်ထင် ဖြစ်လာ၏။ ထို့နောက် သူတို့၏ ဘုန်းကံဓမ္မတာကြောင့် နေ၊ လ ပေါ်လာ၏။ ဤသို့ပေါ်သောနေ့၌ပင်လျှင် မြင်းမိုရ်၊ သတ္တရဘန်၊သီတာ၊ သမုဒ္ဒရာ လေးဆင်း၊ ကျွန်းကြီး လေးကျွန်း၊ ကျွန်းငယ် နှစ်ထောင်၊ ဟိမဝန္တာတာ၊ မြစ်ကြီး၊ အိုင်ကြီးနှင့် စကြဝဠာတောင်သည် ပေါ်လာ၏။ ထိုစကြဝဠာတောင်သည် မြင်းမိုရ် ၊ သတ္တရဘန်၊ သမုဒ္ဒရာ လေးစင်း၊ ကျွန်းကြီး လေးကျွန်းစည်ကို ပတ်ပတ်လည် တံတိုင်းကြီးသဖွယ် ဝန်းရံထား၏။ ရေမှပေါ်ထွက်လာသော ဤ စကြဝဠာတောင်ကြီးကို အစွဲပြု၍ လေးကျွန်း တစ်မြင်းမိုရ် အစုအဝေးကို စကြဝဠာဟု ခေါ်ဝေါ်၏။ စကြဝဠာတောင်၏ အမြင့်ကား၊ ရေပေါ်၌ ယူဇနာ ရှစ်သောင်းနှစ်ထောင်ရှိ၏။ ရေအောက်သို့လည်း ဇောတပထဝီအထိ ယူဇနာ ရှစ်သောင်းနှစ်ထောင်ရှိ၏။ ဇောတပထဝီကို လွန်လျက် သီလာပထဝီအထိ ယူဇနာ ခုနှစ်သောင်းရှစ်ထောင် ထပ်မံ၍ အောက်သို့ နက်လျက်တည်ရှိ၏။ စကြဝဠာတောင်သည် သီလာပထဝီပေါ်တွင် အခြေစိုက်လျက် ရှိ၏။ သိလာ ပထဝီ၏ နိမိတ်အဝန်းသည် စကြဝဠာတောင်ပင်ဖြစ်၏။ သီလာပထဝီမျက်နှာပြင်မှ စကြဝဠာတောင်ထွတ်အထိ ယူဇနာပေါင်း နှစ်သိန်းလေးသောင်း နှစ်ထောင်ရှိ၏။ စကြဝဠာတောင်အထွတ်များတို့သည် ကျေးနှုတ်သီးကဲ့သို့အတွင်း၌ ကွေးညွှတ်ယောင်ယောင်ရှိ၏။
Hubble sees galaxies galore။ spacetelescope.org။ 2017-04-30 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Itzhak Bars; John Terning (2009)။ Extra Dimensions in Space and Time။ Springer။ pp. 27ff။ ISBN 978-0-387-77637-8။ 2011-05-01 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Paul Davies (2006)။ The Goldilocks Enigma။ First Mariner Books။ p. 43ff။ ISBN 978-0-618-59226-5။ 2013-07-01 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
NASA/WMAP Science Team (24 January 2014)။ Universe 101: What is the Universe Made Of?။ NASA။ 2015-02-17 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"The Temperature of the Cosmic Microwave Background" (2009). The Astrophysical Journal 707 (2): 916–920. doi:10.1088/0004-637X/707/2/916. Bibcode: 2009ApJ...707..916F.
NASA/WMAP Science Team (24 January 2014)။ Universe 101: Will the Universe expand forever?။ NASA။ 16 April 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။